ရုပ်ပုံ ဗီဒီယို ကာတွန်း
မွေးနေ့: Feb 05th
သူ့ငယ်ဘဝကသာမန်လူလိုပါဘဲသူ့ရဲ့စကြာဝဠာမှာ. သူ့မိဘတွေကထင်ရှားတဲ့ရှေ့နေတွေပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုပြန်လည်တိုက်ယူပေးပြီး ဆင်းရဲသူတွေကိုလူ့အဖွဲ့အစည်းထဲပြန်ခေါ်ဆောင်လာသူတွေပါ. ဒါ့ကြောင့်လဲသူက ဒီလူမှုကူညီရေးအပိုင်းကိုသတိထားမိလာတယ် သူကြီးလာတော့လဲသူကူညီနိုင်မဲ့အပိုင်းကိုရှာဖွေခဲ့တယ်."
ရန်သူမှလာတဲ့ပျက်စီးမှုအား 600 ကိုကာကွယ်သောအားလွင်ပြင်ဖန်တီးပါ. အားလွင်ပြင်အတွင်းမှအပြင်ရန်သူကိုပစ်ခတ်နိုင်သည်.ရွေ့လျားမှုအလျင်15%တိုးမြှင့်ပြီးအားလွင်ပြင်အတွင်းမှရန်သူသည်ရွေ့လျားမှု 10%အလျင်တိုးမြှင့်ပြီးစွမ်းရည်အသက်ဝင်မည်. သက်ရောက်မှု 4s. CD 50s
ရန်သူမှလာတဲ့ပျက်စီးမှုအား 600 ကိုကာကွယ်သောအားလွင်ပြင်ဖန်တီးပါ. အားလွင်ပြင်အတွင်းမှအပြင်ရန်သူကိုပစ်ခတ်နိုင်သည်.ရွေ့လျားမှုအလျင်18%တိုးမြှင့်ပြီးအားလွင်ပြင်အတွင်းမှရန်သူသည်ရွေ့လျားမှု 11%အလျင်တိုးမြှင့်ပြီးစွမ်းရည်အသက်ဝင်မည်. သက်ရောက်မှု 5s. CD 48s
ရန်သူမှလာတဲ့ပျက်စီးမှုအား 600 ကိုကာကွယ်သောအားလွင်ပြင်ဖန်တီးပါ. အားလွင်ပြင်အတွင်းမှအပြင်ရန်သူကိုပစ်ခတ်နိုင်သည်.ရွေ့လျားမှုအလျင်21%တိုးမြှင့်ပြီးအားလွင်ပြင်အတွင်းမှရန်သူသည်ရွေ့လျားမှု 12%အလျင်တိုးမြှင့်ပြီးစွမ်းရည်အသက်ဝင်မည်. သက်ရောက်မှု 6s. CD 46s
ရန်သူမှလာတဲ့ပျက်စီးမှုအား 600 ကိုကာကွယ်သောအားလွင်ပြင်ဖန်တီးပါ. အားလွင်ပြင်အတွင်းမှအပြင်ရန်သူကိုပစ်ခတ်နိုင်သည်.ရွေ့လျားမှုအလျင်24%တိုးမြှင့်ပြီးအားလွင်ပြင်အတွင်းမှရန်သူသည်ရွေ့လျားမှု 13%အလျင်တိုးမြှင့်ပြီးစွမ်းရည်အသက်ဝင်မည်. သက်ရောက်မှု 7s. CD 44s
ရန်သူမှလာတဲ့ပျက်စီးမှုအား 600 ကိုကာကွယ်သောအားလွင်ပြင်ဖန်တီးပါ. အားလွင်ပြင်အတွင်းမှအပြင်ရန်သူကိုပစ်ခတ်နိုင်သည်.ရွေ့လျားမှုအလျင်27%တိုးမြှင့်ပြီးအားလွင်ပြင်အတွင်းမှရန်သူသည်ရွေ့လျားမှု 14%အလျင်တိုးမြှင့်ပြီးစွမ်းရည်အသက်ဝင်မည်. သက်ရောက်မှု 8s. CD 42s
ရန်သူမှလာတဲ့ပျက်စီးမှုအား 600 ကိုကာကွယ်သောအားလွင်ပြင်ဖန်တီးပါ. အားလွင်ပြင်အတွင်းမှအပြင်ရန်သူကိုပစ်ခတ်နိုင်သည်.ရွေ့လျားမှုအလျင်30%တိုးမြှင့်ပြီးအားလွင်ပြင်အတွင်းမှရန်သူသည်ရွေ့လျားမှု 15%အလျင်တိုးမြှင့်ပြီးစွမ်းရည်အသက်ဝင်မည်. သက်ရောက်မှု 9s. CD 40s
K ကဂျူဂျစ်ဇူးကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ပြီး ပရောဖက်ဆာတစ်ယောက်လဲဖြစ်ပါတယ်